Izilinganiso ze-BEST Casshern Sins Ezifanele Ukwabiwa! - Okunye
Izilinganiso ezingama-17 + ezihamba phambili ze-Casshern Sins With A Purpose!
Izilinganiso zeCasshern Sins kuthathwe kubalingiswa:
Izono zikaCasshern iyi-anime ekhiqizwe yi-studio edume kakhulu - iMadhouse. Ngokugxila ekusaseni elikude nasekuqothulweni kwesintu.
Uma ungumlandeli noma ufuna izingcaphuno ezinhle, le anime inezinto ezimbalwa ezingabiwa ngokufanele.
Nayi imigqa ehamba phambili evela eCasshern Sins.
1. Izilinganiso zeCasshern
'Mhlawumbe abantu bavame ukuthuthukisa ubuthakathaka babo…… lapho bevikela omunye umuntu bese bezivikela bona.' - UCasshern
“Yize kukhona ukuphila, kodwa akekho umuntu ophila ngakho. Impilo iyachichima futhi baziphuzela nje. Kepha uDio nabo bonke abantu engihlangane nabo ohambweni lwami abanjalo ... ba .. bangaphezulu… bebeshisa ngomlilo. Bekuyizimbaqa ezivutha impilo. ” - UCasshern
“Cha ngeke ngikubulale, kusekhona abantu abakufunayo befuna impilo, kungumsebenzi wakho ukubasiza, uma ukusinda kuyilokho abakufunayo ngakho-ke kungcono banakho, angikwazi ukubaphika lokho. Kodwa-ke uma wena noma UMUNTU ukhohlwa ubuso bokufa… .bese ngizobuya. ” - UCasshern
“Uma umhlaba ukuvunguza ekonakaleni ngenxa yezenzo zami .. ke-ke kungumsebenzi WAMI ukuzama ukukuvimba ungabhubhisi konke. ” - UCasshern
'Kubo bonke abantu abahlala kulo mhlaba, ngamunye wabo uphilela wonke umoya abaphefumulayo!' - UCasshern
'Lokho abantu abakufunayo lapho ukujula kokuphelelwa yithemba nokufa kuphezu kwabo, kungaba yimifanekiso yalabo ababathandayo.' - UCasshern
'Ngiletha inhlekelele emhlabeni, futhi ngalokho angifanele ukuphila.' - UCasshern
'Uma ukhohlwe ukufa .. bese ukhohliwe ukuthi kusho ukuthini ngempela ukuphila.' - UCasshern
'Angazi lutho ... ngisho nami uqobo, kodwa izitha zami zingibiza ngokuthi ... Casshern.' - UCasshern
'Amarobhothi abekholelwa ekuphileni okuphakade ayaqhubeka nokushabalala, kodwa hhayi mina.' - UCasshern
2. Izilinganiso ze-Dune
'Ngifuna ukuphila… ngifuna ukubamba okuthile ezandleni zami ngizwe imfudumalo yako.' - Indunduma
'Ngiyeneliseka ngokuba yimbali nje, ngiqhakaze futhi ngibune… yilokho kuphela ebengikudinga.' - Indunduma
'ILanga alinikeli, cishe bonke bakhetha ukuthatha kuwo ngobugovu.' - Indunduma
3. Izilinganiso zeLuna
'Ngiphendulile izingcingo zalabo abake beza lapha, futhi nginike bonke abakufisayo.' - uLuna
4. Unikeze ama-Quotes
“Kubekezelele! Ungikweleta i-Casshern engaka engiyiphilelayo ukukulwela! Ngikwazile ukusinda manje sekuyithuba lakho lokuthi nawe wenze okufanayo! ” - Dio
'Angikholelwa kuNkulunkulu noma emandleni amakhulu, kodwa ngiyabonga ngalesi sibusiso.' - Dio
5. Izilinganiso zeBraiking Boss
'Angazi ukuthi uhlela ukwenzani, kodwa ngicabanga nje ukuthi ukuphela kwendlela yakho yokukhokha isikweletu sakho emhlabeni… uCasshern..sindisa uLuna unomphela… Njengoba ngilele lapha ngifa, ngiyethemba Ngizihlawulele izono zami. ” - IBraiking Boss
Zonke Izingcaphuno Ezinengqondo Ngokuphathelene Nezothando Ezivela ku-Ore Monogatari (Indaba Yami Yothando)
Izilinganiso ezingama-22 + Ezivela Engadini Yaboni Ezizokwenza Ubuze Impilo
i-anime efana nesithandwa ku-franxx
i-anime ehamba phambili ye-poll yesikhathi sonke
i-anime ekalwe kabi kunayo yonke isikhathi